Gaojing Capital သည် ခွဲခြားဆက်ဆံ မှုမရှိသော နှုတ်ထွက် မှု ကောလာဟလ များကို – Pandaily
Gaojing Capital သည် ခွဲခြားဆက်ဆံ မှုမရှိသော နှုတ်ထွက် မှု ကောလာဟလ များကို
Jun 01, 2022, 16:58ညနေ 2022/06/01 23:27:28 Pandaily
Sina နည်းပညာဘေဂျင်း အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ Gao Capital သည်အဓိကအားဖြင့် အဓိက စျေးကွက် အုပ်စု မှ ၀ န်ထမ်း အဆင့် အမျိုးမျိုး ပါ ၀ င်သော ခွဲခြားဆက်ဆံ မှုမရှိသော အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်း ခံ နေရကြောင်း အတွင်းလူ အများအပြား ၏ chat မှတ်တမ်းများအရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အစီရင်ခံခဲ့သည်။Gao Capital ၏ပြ ော ရေးဆို ခွင့်ရှိ သူက နောက်ပိုင်းတွင် သတင်းကို ငြင်းဆို ခဲ့သည်ပြည်တွင်း မီဒီယာ များကို တုန့်ပြန် ရာတွင် ကောလာဟလ ဟုခေါ် ခဲ့သည်။
Zhang Lei မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Gaojing Capital Group သည် ရေရှည် စနစ်တကျ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကို အာရုံစိုက်သည်။ ပေကျင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ နယူးယောက်၊ ကယ် လီဖိုး နီးယား၊ စင်ကာပူ နှင့်အခြား နေရာများတွင် ရုံး များ ဖွင့်လှစ် ထားသည်။ စားသုံး သူနှင့် လက်လီ ရောင်းဝယ် မှု၊ TMT (နည်းပညာ၊ မီဒီယာ နှင့်ဆက်သွယ်ရေး) ၊ အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှု ၊။
Sina Technology ၏အစီရင်ခံစာ တွင် VC မိတ်ဖက် တစ် ဦး က နှုတ်ထွက် မှု ကောလာဟလ များသည် အခြေခံအားဖြင့် မှန်ကန် ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Gao Capital ၏လက်ရှိ အစီအစဉ် မှာ စားသုံးသူ အုပ်စုများကို လုံးဝ လျှော့ချရန် ၊ TMT အုပ်စုများကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေရန် နှင့်နည်းပညာ နယ်ပယ် သို့ပြောင်းလဲ ရန်ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များကလည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သော ရန်ပုံငွေ အချို့သည် စားသုံး မှုနှင့် ပညာရေး နယ်ပယ် ရှိ အဖွဲ့ တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်တောက် ပစ် ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မြင့်မားသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပါ ၀ င်သည့် ပေါက်ကြား သည့် ဖန်သားပြင် တွင် သတင်းစကား တစ်ခုက “ ငါ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ် အနည်းငယ် က အစုစု ကိုပြန်လည်သုံးသပ် ပြီး ပြီ။ အခု ငါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အချက်အလက်တွေကို အမြဲတမ်း ဖတ် သင့်တယ်။ အလယ်အလတ် စီမံခန့်ခွဲ မှုက အငယ်တန်း ၀ န်ထမ်း တွေဆီ ကနေ အလုပ် ထုတ်ပစ် လိုက်တယ်။” အစုစု ပြန်လည်သုံးသပ် မှု အစီရင်ခံစာ သည် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် က ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ညက အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခံ ခဲ့ရသည်ဟု သတင်းရပ်ကွက် ကဆိုသည်။ Boss မှ နောက်ထပ် မွမ်းမံ မှုများကို စောင့်ဆိုင်း နေသည်။
အင်္ဂါနေ့ တွင်ဖော်ပြ သင့်သည်။ပြည်တွင်း မီဒီယာ အချို့Zhu Xiaohu အမည်ရှိ လူသိများသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတစ် ဦး သည်သူ၏ သူငယ်ချင်း များ အသိုင်းအဝိုင်း တွင် VC အခြေအနေ နှင့်ပတ်သက်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အစီရင်ခံစာ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကိုထုတ်လွှင့် ခဲ့သည်။ “ ဒီနှစ် တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ VC အခြေအနေက ဆိုးရွား နေတယ်။ လာ စမ်း ပါ ဦး ။ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေး လမ်း ပေါ်ရှိ ညီအစ်ကို များ!”
Zhu Xiaohu မှ ဖော်ပြ ခဲ့သော အစီရင်ခံစာတွင် သုတေသန ကုမ္ပဏီ Preqin ၏ အချက်အလက်များအရ အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် အိန္ဒိယ တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုအာရုံစိုက် သည့် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး ရန်ပုံငွေ များသည် ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၁ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၅ ဘီလီယံ နီးပါး ရှိပြီး တရုတ် ကိုအာရုံစိုက် သည့် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး ရန်ပုံငွေ များထက် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများသည်။ လက်ရှိတွင် ယခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန်အတွက် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး စုစုပေါင်း သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂. ၁ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇. ၂ ဘီလီယံ ရရှိရန် မျှော်လင့်ချက် လျော့နည်းစေသည်။
Gaojing Capital သည် Xiaopeng နှင့် Li Automobile တို့၏ ပိုင်ဆိုင်
Hillhouse Capital ၏ဒုတိယ စျေးကွက် ကိုအာရုံစိုက် သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ HHLR Advisors သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် အတွက် အမေရိကန် စတော့ရှယ်ယာ အစုစု နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။